Shirkadda Google oo ka Hir-gelinaysa Hindiya Internet lacag la’aan ah Weliba kasii xawaare badan kuwa kale | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Shirkadda Google oo ka Hir-gelinaysa Hindiya Internet lacag la’aan ah Weliba kasii xawaare badan kuwa kale
Mar 28, 2017 - 2 Jawaabood
Shirkadda GOOGLE, ayaa Mashruuc Internet oo lacag la’aan ah ka Hir-galinaysa laga Dalka Hindiya si ay u hesho dad badan oo isticmaala adeegeeyada shirkaddan. Adeegan Internet oo lagu Magacaabo Google Station, ayaa Wi-Fi siin doona Saldhigyada Tareennada, iyadoo la doonayo in lagu sii ballaariyo dukaamada iyo maqaayadaha.
Sidoo kale, Google ayaa hadda bixisa adeegyo Internet aad u dhaqso badan oo lacag la’aan ah, kuwaasoo ay siiso 52 saldhig oo kuwa Tareenada ah oo ku yaalla ee Hindiya. waxayna shirkaddu sheegtay in mashruucan Internet la gaarsiin doono illaa 100 saldhig tareen marka la gaaro dhamaadka sanadkan.
“Mashruucan wuxuu ka mid noqonayaa mashaariicda Internet-ka ugu wayn ee shacabka Hindiya ka dhexeyn doona, sidoo kale wuxuu noqonayaa midka ugu weyn Adduunka ee ay dad badan isticmaalaan,” ayuu yiri Madaxa Google ee Gobolka Sundar Pichai ee dalka Hindiya.
Wuxuuna intaas ku daray. “Markii la gaarsiiyo 100 saldhig Tareen mashruuca internet-ka, waxaana la qiyaasayaa inay isticmaali doonaan shacab ka badan illaa 10-milyan oo qof, kuwaasoo maalin walba isticmaala tareennada.”.
Adeegan Internet ee Google ay ka hirgelinayso Hindiya ayaa marka hore ku billaaban doona si lacag la’aan ah, balse shirkadda ayaa sheegtay inay wado qorshe cusub oo ay ku doonayso mustaqbalka inay lacag ka dhigto. kaddib marka ay gaarsiiso 400 oo Saldhigyada Tareennada ah, Waxayna sidoo kale qorsheynaysaa in ay mashruucaan la kaashato shirkado kale si loo gaarsiiyo xarumaha ganacsiga sida; Dukaamada, Maqaayadaha iyo Meelaha kale ee ay ka mid yihiin kuwa kubadda cagta laga daawado.
, oo ah gudoomiye ku xigeenka qaybta loogu talogalay bilyanka qof ee macaamiisha mustaqbalka, oo lagu beegsanayo waddamada dhaqaalahoodu soo karayo: “Ilbiriqsi kasta saddex qof ayaa soo gala internetka, waxaan doonaynaa, inaan hubino inay helaan adeeg fiican.
“Saddex qof ayaa gala il-biriqsi kasta Internet-ka, balse mustaqbalka wuu ka duwanaan doonaa sidan. waxaana rajeynaynaa inay dad badan isticmaalaan si ay ula xiriiraan caalamka intiisa kale,” ayuu yiri Ceasar Sengupta oo ka mid ah saraakiisha shirkadda Google ee dalka Hindiya.
Ugu dambeyn, Dalka India ayaa waxaa Internet-ka Isticmaala dad tiradooda lagu qiyaasay illaa 350-milyan oo qof, Waxaana la filayaa inay noqdaan 600 oo milyan – saddexda sano ee soo socota.
alimahdi farah says:
asc macaliinta dhamaan sahalsoftware aad iyo aad baad umahadsantihiin hawshan aad uqabateen umada somaliyeed ama da,yarta somaliyed waxaan aad uga faa iidaystay ama daawaday computerka in kasto cashirada qaar downloud kii dideen lkin wax badan baan ka qaty asxab farabadana waan gaar siiyaya wabsiteka markaa waxaan rabaa insha aalhu markaan xooga akhristo inaan si toosa isu diwaan galiyo imtixaana la iga qaado kadib shaahaado la isiiyo ,jasakallhu khyr sahal software
wcs walaal ma sha allah aad ayad u mahadsantahay walaal soo dhawoow imtaxankana la xiriir Email- support@sahalsoftware.com
Ka Faa’iideyso Su’aalo Iyo Jawaabo Aqoon Kororsi Ah: - 66,018 views
Download All Books: Buuggaagta Sahalsoftware Halkan ka Rogo - 36,906 views
Manhaj ka Sahalsoftware iyo sida ay isugu xigaan Barnaamij-yadu Halkan ka baro - 19,933 views